Waxaad si fudud u celi karaa Xadidaada habayn ku iPhone / iPad
2 Siyaabo Sahlan ee Dib u celi Xadidaada habayn ku iPhone
Habayn xadaysan runtii waa hab fiican oo aad ku qaadan iPhone inay gacanta hawlaha carruurtaada. Si kastaba ha ahaatee, haddii aad u illoobin, waxaa laga yaabaa in aad hesho dhibaato, wax ma waxaad ka iibsan kartaa ee aad iPhone, rakibi ama uninstall barnaamijyadooda aad. Ha welwelin, weli waxaa jira qaar ka mid ah siyaabaha ay u dib u habayn ama xayiraad. Raac macluumaadka hoose si aad wax badan oo ku saabsan xayiraad habayn bartaan.
Qeybta 1: 2 Siyaabaha dib u habayn ama xayiraad aad iPhone
Qeybta 2: waa maxay xayiraad habayn
Qeybta 3: Sida loo dhigay xayiraad habayn ku saabsan iPhone
Haddii aad illowdo in aad habayn xadaynta iPhone, markaa doorasho uu yahay kaliya in dib u habayn ama xadeyn ku saabsan iPhone. Waxaan ka heli jiraan 2 siyaabaha loo joojiyo oo xayiraad habayn ku iPhone. Dooro mid ka mid ah in ay kugu habboon.
Xalka 1: Dib u celi xayiraad habayn by celinta aad iPhone in goobaha warshad
Xalka 2: Dib u celi iPhone xayiraad habayn by kabashada Xadidaada habayn ku Mac
Tallaabada 1. Start Lugood aad kombuutarka Windows ama computer Mac.
Tallaabada 2. qaado aad iPhone. Saxaafadda "Power" button iyo "Home" isku mar ilaa qalabka muhu. Fur "Power" button Laakiinse ay xajiyaan oo xajinaya badhanka "Home".
Tallaabada 3. Isku aad iPhone in computer via cable USB isku xira. Ku xiridda qalabka korontada, sii haya "Home" badhanka. Marka isku xira, qalabka waa in xiriir la yeeshaan logo Lugood iyo cable USB shaashad madow. Marka aad aragto shaashadda this, sii daayo "Home" badhanka.
Tallaabada 4. Tag barnaamijka Lugood ugu on your computer iyo riix "OK" button marka aad aragto fariin digniin ah "Recovery Mode". Riix ah "Soo Celinta" button aad u bilowdo hawsha loo soo celiyo. Waxay qaadan kartaa dhowr daqiiqo, laakiin ka dib in la dhammaystiro, iPhone la soo celiyo si ay goobaha warshad.
Habka ugu fudud ee dib u habayn ama xadeyn ku saabsan iPhone waa in ay u soo celin la file ah oo gurmad sameeyey ka hor habayn ama xayiraad la dhigay. Si kastaba ha ahaatee, inta badan xaaladdu waa in dadka isticmaala ma ka heli kartaa file u gurmad sameeyey ka hor. Xaaladdan oo kale, waxaad u leedahay in aad soo celin iPhone in goobaha warshad. Si kastaba ha ahaatee, sidan masixi doono dhammaan macluumaadka ku saabsan iPhone. Haddii ay sidaas tahay, si ay u dhawrto xog muhiim ah, waxaad isku daydaa inaad Wondershare Dr.Fone ee macruufka in ay marka hore baarista iPhone iyo aad u hesho macluumaadka, sida xiriirada, sawiro, videos iyo fariimaha qoraalka ah, ka iPhone si aad u computer. Hoos waxaa ku qoran talaabooyinka in dib u habayn ama xayiraad ay dib u soo celinta aad iPhone in goobaha warshad.
Tallaabada 1. Isku aad iPhone in aad Mac. Burcad Lugood iyo gurmad aad iPhone la Lugood.
Tallaabada 2. Download ku qalab oo akhriyi doonaa xayiraad habayn ku saabsan Mac. Saaro file zip iyo abuurtaan app. Guji "Read hayaan" oo xulo iPhone.
Tallaabada 3. Scroll hoos u furmo suuqa, dooro "macruufka Faylal ay" ka dibna "Waraaqda". Hubi meesha aad soo bixiyay files macruufka iyo dedeg macruufka Files> Library> Waxa aad rabtid.
Tallaabada 4. raadso oo guji furo file "com.apple.springboard.plist" ee Property List Editor. Oo weliba waxaa SBParentalControlsPin , waa inuu jiraa ugu muhiimsan ee ah. Waa in aad xayiraad habayn loogu talagalay iPhone. Waxaa Xusuusnow oo u soo jeesan aad iPhone loo isticmaalo si dib u habayn xayiraad.
Xadidaada kasoo muuqdo ka mid ah iPhone ogol yahay waalidka in la xakameeyo oo codsiyada iyo muuqaalada gudahood telefoonka carruurta ay ka heli karaan. Xadidaada xannibi karaa awood u leh inay wacaan video ama download music qaar si gaar ah, filimo iyo Nayroobi. Fursadaha gacanta waalidka isticmaasho fure ammaanka qof ahaaneed (PIN) ee afarta lambar - xayiraad habayn. Tani waxay ka hortagtaa karaan goobaha ay qarka u saaran waalidiinta ka naafada ah ama bedelay carruurta aan ogolaansho.
Xadaynta Waxaa jira in la xadido hawlaha qaarkood oo aan la beddeli karaa xaaladaha sida isbeddel ah ee xisaabaadka si aad u iibsato aan u baahan sirta ah, ay ka saareen barnaamijyadooda, iwm Sidaas waa in aan ognahay waxa aan ka shaqeysiin ama aan si ay u kordhiyaan ammaanka. Tani waa mid aad muhiim u ah, haddii mawduuca ayaa la taabtay ka hor mid ka mid ah tifaftirayaasha ee website-kan, mana jiri doonto in ka badan ku adkeeyay waxa ku.
Laakiin haddii aadan xitaa war waa in aad ogaataa in aad sida ugu rakibi macruufka by default, marka aad wax ku iibsatid on Lugood iyo dib password ay sii wadi karo shopping aan mar kale loo baahan yahay ilaa ka dib 15, tani waxay noqon doontaa mid aad u raaxo leh, laakiin waxaa Dhab ahaan ma ahan mid qorshaha ugu talinayaa mana ammaan ah, gaar ahaan haddii ay jiraan kids kuwaas oo ay heli karaan kombiyuutar inta lagu jiro xilliga la is waydiinayo.
Settings Open> General> Xadidaada iyo isbeddelka bandhigay si aad u ogaato qoraalka, taabto waxa ku jira oo xayiraad kale oo aad kadhawaajin karto in uu soo bandhigo sanduuq weydiinaya soo bandhigo xeerka, oo ay ku soo celiyaan doonaa laba jeer si loo xaqiijiyo inuu sax yahay.
Tallaabada 1. Tag Settings> General> Restrictions.You u baahan yihiin in "Enable xayiraad" haddii aadan ayaa waxa ay hore u karti.
Tallaabada 2. Ku qor password 4 lambar oo aad u leeyihiin in ay galaan waqti kasta marka aad doonayso in aad isbedel ku xadaynta mustaqbalka sameeyo iyo sidoo kale inay iyaga gab.
Tallaabada 3. Waxaa lagu weydiin doonaa markii labaad password si ay u xaqiijin. Calan oo dhan aad dareento waa lagama maarmaan u ah xayiraad si aad macluumaad shakhsiyeed oo ammaan ah.
Iyada oo xayiraad kuwaas oo aad xannibi karaa isticmaalka hooyo macruufka Apps ee ka kooban aad soo bixi. Sidaas ayaad u ogolaan kartaa ama xaddido isticmaalka barnaamijyadooda macruufka hooyo sida Safari, camera ah, markii Face, Lugood iyo iBook Store, fursado kale oo ka mid ah si fudud adiga oo riixaya biiro on-off ah oo u muuqata in menu kasta. Tani waa mid aad u xiiso ah in ay si ammaan ah u sii kuwan codsiyada in la heli karo in ay carruurta iyo dadka kale ee ay heli karaan qalabka.
Waxa kale oo aad la qabsato karaan goobaha ay sidaas daraaddeed ma ay ku rakiban kartaa ama ka saar codsiyada qalab ama xitaa waxaad dooran kartaa dalka si ratings da'da ah codsiyada. Waxa kale oo aad sii xaddido karaa xadeynta dheecaan codsiyada doorataa xadka da'da, kala dooranaya +4, +9, +12, iyo +17 sano ama da'da xadka default u filimada in lagala soo bixi karaa. Si tan loo sameeyo waxaad si fudud u leeyihiin in ay wax miiran codsiyada tab ama filimada, xulo kala duwan ee ka sareeya da'da ay u oggolaadaan downloads, oo sidaas si toos ah Apps iyo / ama filimada in ay yihiin xadka hoos laga yaabaa in aan la saaray.
Guide of 5 barnaamijyadooda inay muusikada lacag la'aan ah iPhone / iPod / iPad
> Resource > iPhone > celi Xadidaada habayn ku iPhone